» मकवानपुरको पुरा विकास गर्नका लागि मेरो उम्मेदवारी :बानियाँ
१८ मंसिर २०७४, सोमबार २०:०५
मकवानपुरको पुरा विकास गर्नका लागि मेरो उम्मेदवारी :बानियाँ
पूर्व गृहराज्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस मकवानपुरका सभापति ईन्द्रबहादुर बानियाँ अहिले चुनावी मैदानमा छन् । प्रतिनिधिसभा मकवानपुर क्षेत्र नम्बर २ को प्रदेश २ बाट उम्मेदवारी दिएका पूर्व सांसद बानियाँको उम्मेदवारी पछि यस क्षेत्रमा चुनावी अभियान निकै प्रतिष्पर्धी बनेको छ । प्रस्तुत छ उम्मेदवार बानियाँसँग चुनावी अभियान र उम्मेदवारीको सेरोफेरोमा गरिएको कुराकानी ।
यस पटक प्रदेशसभामा तपाईको उम्मेदवारी किन रह्यो ?
यसअघि २०७० सालमा संविधानसभाको निर्वाचनमा मकवानपुर क्षेत्र नम्बर १ का जनताको मतले विजय भएर चार बर्षे कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छु । अहिले मंसिर २१ गते हुने निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर २ को प्रदेश दुईमा उम्मेदवारको रुपमा प्रस्तुत भएको छु । जनताको बर्षौदेखिको विकासको आकांक्षा पुरा गर्नु नै मेरो उम्मेदवारी हो । पटक पटक मत दिएपनि त्यस क्षेत्रको विकास गर्न यसअघि जितेकाहरुले काम नगरेको गुनासो त्यस क्षेत्रका जनताबाट आएपछि मैले विकासको आकांक्षा पुरा गर्न उम्मेदवारी दिएको हुँ ।
यसअघि जितेका उम्मेदवारले काम नगरेको आरोप लगाउँदै हुनुहुन्छ । आफुले चै के गर्नुभयो ?
मतदाताले दिएको पहिलो जिम्मेवारी संविधान निर्माणको काम पुरा गरेको छु । संविधान निर्माणपछि मेरो ध्यान विकास निर्माणको काममा केन्द्रित रह्यो । बर्षौदेखि विकासमा पछि परेको मकवानपुर क्षेत्र नम्बर १ मा कान्तिलोकपथ, धरान चतरासहितका सडक पूर्वाधारको काम तिब्र गतिमा भईरहेका छन् । प्रमुख रणनीतिक सडकहरु, नदि प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने काम, विद्यालय, मठ मन्दिर, पुल लगायतका क्षेत्रमा अर्बौको लगानी भएको छ । अहिले म प्रतिनिधिसभा मकवानपुर क्षेत्र नम्बर २ को प्रदेशसभा २ बाट उम्मेदवार बन्दै गर्दा जनतामा उत्साह आउनुको कारण पनि मैले विगतमा गरेको विकासे काम नै हो । जनताको आकांक्षा भनेको सुख दुःखमा साथ दिने र विकासको काम गर्ने नेता नै हो । त्यो आकांक्षा मैले पुरा गरेको छु ।
तपाईको अहिलेको चुनावी एजेण्डा के के छन् ?
मकवानपुरको प्रतिनिधिसभा २ को प्रदेश सभा २ जिल्लाकै विकट क्षेत्र हो । यो क्षेत्रको भौगोलिक विकटताका कारण यहाँका जनताले यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका अत्यावश्यक सेवामा कठिनाई भोगिरहनु परेको छ । यो क्षेत्र सिमान्तकृत चेपाङ समुदायको बाहुल्य क्षेत्र र लोपोन्मुख बनकरिया समुदायको बसोबास भएको क्षेत्र पनि हो । सबै दृष्टिकोणले विकासमा पछि परेको यो क्षेत्रको विकास गर्नु नै मेरो उम्मेदवारीको प्रमुख कारण हो । मैले पहिलो प्राथमिकता यस क्षेत्रको सडक सञ्जाललाई विस्तार गर्ने कामलाई राखेको छु । डाँडाबास–डाँडाखर्क–शिलाधुनी–भण्डारा सडक, नारायणगढ–मुग्लिन सडकको बैकल्पिक सडकको रुपमा मनहरी–डाँडाखर्क–धादिङ–मलेखु सडक, रजैया–लामिटार–पदमपोखरी हुँदै हेटौँडाको पूर्वपश्चिम जोड्ने सडकसहितका प्रमुख र अन्य सडकहरुलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने छु ।
उम्मेदवार भोट माग्छन् तर जितेर गएपछि फकिएर आउँदैनन् भन्ने गुनासो छ नि ?
यसअघि जितेका सबै नेताहरुले जनतालाई झुक्याएका कारण जनताको यो प्रश्न आएको हुन सक्छ । तर मेरो हकमा यो कुरा लागु हुँदैन । म जनताबाट एक पटक अनुमोदन भएको उम्मेदवार हुँ । अनुमोदन भएपछि मैले मत माग्दा गरेको प्रतिवद्धता ९० प्रतिशत पुरा गरेको छु । म त्यस्तो नेता हो जो सबैभन्दा बढि आप्mनो निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेको छु, हरेकलाई नजिकबाट सहयोग गरेको छु, चाहे सभासद र सांसद हुँदा होस्, चाहे मैले राज्यमन्त्रीको भुमिका बहन गर्दा होस् । मतदाता आफुले मत दिएको नेता सधैं आप्mनो गाउँघरमा आओस् भन्ने ठान्दछन्, मैले त्यो काम गरेको छु । कम्युनिष्टहरु आश्वासनको पोका बाँडेर चुनाव जित्छन् र जनतालाई धोका दिन्छन्, त्यसैले जनताको कम्युनिष्ट उम्मेदवार र नेतासँग सधै चित्त दुखाई र गुनासो हुन्छ । नेपाली कांग्रेस विश्वास दिलाउँछ, विकास पु¥याउँछ त्यसैले हामीसंग जनता सधैं खुशी हुन्छन् । मैले उम्मेदवारी दिएपछि मेरो उम्मेदवारी क्षेत्रमा देखिएको उत्साह त्यसैको उदाहरण हो ।
यसअघि जितेर विकास गरेको क्षेत्र नै छोडेर अर्कै क्षेत्रमा किन चुनावमा उत्रनु भयो ?
नेपाली कांग्रेसले पहिलो पटक जनताको सेवा गर्ने अवसर पाएको मकवानपुर क्षेत्र नम्बर १ बाटै हो । जनताले नेपाली कांग्रेसको रुख चिन्हको उम्मेदवार मलाई विश्वास गरेर विजय गराएपछि मैले पनि आप्mनो कार्यकालमा यस क्षेत्रको विकासमा सक्दो काम गरें । मकवानपुरमा ५ दशकदेखि जितेका जनप्रतिनिधिले नगरेको काम मैले ४ बर्षको कार्यकालमा गरें । त्यस कारण मकवानपुर क्षेत्र नम्बर १ का मतदाताले मलाई त्यही क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिन सुझाव दिईएको थियो । मैले छोटो समयमा यस क्षेत्रको विश्वास आर्जन गरेकै हो । किनकी यसअघि मत दिएकाहरुले मतको सम्मान गर्न सकेनन्, विकासको काम गरेनन् । तर वर्तमान राजनैतिक परिस्थितिका कारण मैले फरक क्षेत्र उम्मेदवारी दिनु परेको हो । यो मैले आप्mनो मतदातालाई बुझाईसकेको छु । म नेपाली कांग्रेस मकवानपुरको जिल्ला सभापति भएकाले सबै क्षेत्रको विकासमा उत्तिकै सहभागी हुनुपर्ने मेरो जिम्मेवारी पनि हो । मैले अर्को क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिंदै गर्दा पनि म भौतिक एवं भावनात्मक रुपमा मकवानपुर क्षेत्र नम्बर १ का जनतासंगै छु । मैले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेर बाँकी रहेका थोरै काम पुरा गर्न र आगामी दिनमा थप नयाँ योजना मकवानपुर क्षेत्रमा लैजानेमा म प्रतिवद्ध छु ।
गाँजा प्रभावित क्षेत्रको उम्मेदवार भएकाले यसको न्युनिकरणमा के काम गर्ने सोच अघि बढाउनु भएको छ ?
म यस मुद्धामा स्पष्ट छु । यो क्षेत्रमा गाँजा खेति धेरै हुने गरेको थियो । तर पछिल्ला बर्षहरुको तथ्यांक हेर्नुहुन्छ भने त्यस क्षेत्रमा गाँजा खेति गर्ने क्रम घट्दै गएको छ । सडक सञ्जाल नहुँदा आफुले उत्पादन गरेका काउली, फर्सी, काँक्रो, खुर्सानी बजारसम्म पु¥याउन बढि लागत लाग्ने भएकाले थोरै आर्थिक लाभका कारण विगतमा यस क्षेत्रमा गाँजाखेति भएको हो । थोरै आर्थिक प्रलोभनका कारण गाँजाको व्यापार गर्दा होस् वा जीवनयापनका लागि भरियाको काम गर्दा धेरैजना अहिले विभिन्न कारागारमा सजाय भोगिरहनु भएको छ । अहिले यही कारण धेरै परिवार टुटेको छ, बालबच्चाको विचल्ली भएको छ । मेरो मूल उद्देश्य यस क्षेत्रका सबैतिर सडक सञ्जालले जोड्ने हो । सडक सञ्जाल जोडिएसंगै यस क्षेत्रमा गाँजाको विकल्पको रुपमा नगदे बालिलाई प्रोत्साहन गर्न सके गैरकानूनी भनेर निषेध गरेको काममा यस क्षेत्रका जनता लाग्दैनन् । बाध्यताका कारण विगतमा गरेको कामलाई छोडेर नयाँ ढंगले आर्थिक उपार्जनतर्फ लाग्ने छन् भन्ने मेरो विश्वास छ ।
सबै उम्मेदवार जित सुनिश्चित भएको कुरा गर्छन् । यहाँको सम्भावना के छ ?
चुनावी मैदानमा उत्रिएको जित्नकै लागि भएकाले सबैले जित्छु भन्नु स्वभाविक हो । तर मेरो जित्ने केही ठोस आधार छन् जो अन्य उम्मेदवारहरुमा छैन । पहिलो आधार पटक पटक जनताले कम्युनिष्टहरुका उम्मेदवारलाई जिताएर पठाएपनि मकवानपुर विकासमा सधै पछि परिरह्यो । तर एक पटक नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवारलाई जिताउँदा क्षेत्र नम्बर १ मा गरेको काम सबैलाई जानकारी नै छ । त्यसैले लोतान्त्रिक गठबन्धनले जित्ने निश्चित छ । दोस्रो बाम गठबन्धनका नाममा उही यसअघि पटक पटक जितेका उम्मेदवार फेरि पनि जनतामाझ जाँदै छन्, यसअघि जितेर काम नगरेका पुराना उम्मेदवारलाई जनताले मत नदिने पक्का छ । जनता विकास चाहन्छन्, आप्mनो सन्ततिको भविष्य उज्वल होस् भन्ने चाहन्छन् । विकास गर्ने नेताको खोजीमा रहेका जनताले म र लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवारलाई नै विजय गराउँछन् ।
राजनैतिक परिस्थतिका कारण मेरो उम्मेदवारी प्रदेशसभामा हुने भएपछि पार्टी नेतृत्वले मेरोबारेमा विशेष चासो र चिन्ता राखेको सत्य हो । प्रदेशको राजधानी हेटौँडा ल्याउने विषयमा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासंग गरिएको पहलका कारण अहिले अस्थायी भएपनि राजधानी हेटौँडा नै तोकिएको छ, यसलाई स्थायी रुपमा यही राख्ने प्रतिवद्धता पनि छ । मकवानपुर क्षेत्र नम्बर १ का जनताले मलाई विजय गराएपछि उहाँहरुको सम्मानमा पार्टीले मलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री र गृहराज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको थियो । दुबै जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेको, जिल्ला सभापतिको भूमिका पनि कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्दै जिल्लामा स्थानीय तहमा राम्रो उपस्थिति गराएका कारण पार्टी नेतृत्वमा म प्रति भरोसा बढेको छ । पार्टीका विभिन्न बैठकमा मूख्यमन्त्रीको बारेमा चर्चा हुँदा मेरो नामबारे छलफल भएको छ । प्रतिनिधिसभा मकवानपुरका क्षेत्र नम्बर २ को प्रदेशसभा २ का मतदाताले विजयी गराएपछि पक्कै पनि यस क्षेत्रका जनताको मतको सम्मान हुनेछ । यहाँहरुले अपेक्षा गरे अनुसार पार्टी नेतृत्वले मूल्यांक गर्नेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।